Rasmi: Tiger Shroff iyo Shraddha Kapoor oo Baaghi 3 wada sameenayaan iyo xiliga shaqadiisa bilaabaneyso – Filimside.net
Rasmi: Tiger Shroff iyo Shraddha Kapoor oo Baaghi 3 wada sameenayaan iyo xiliga shaqadiisa bilaabaneyso
February 12, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 12, 2019
Ugu dambeyntii atirishada laga daba dhacay Shraddha Kapoor ayaa dib ugu soo laabatay taxanaha hirgalay Baaghi ayadoo qaybta kowaad sameesay 2016 balse qaybta labaad ma aysan kasoo muuqanin waxaana booskeeda gashay Disha Patani balse haatan Shraddha waxay door adag ku lahaan doontaa Baaghi 3.
Tiger Shroff hogaamiyaha Baaghi 3 ayaa sidoo kale ku faraxsan inay markale Shraddha shaashada wada wadaagi doonaan madaama ay yaraantooda hal meel kusoo wada bar baareen saaxiibo dhow yihiin waayo labadooda aabo Jackie Shroff iyo Shakti Kapoor ayaa daris ahaan jireen shaqo badana soo wada qabteen.
Sajid Nadiadwala oo maal galinaayo Baaghi 3 ayaa si rasmi ah u sheegay mashruucan weyn dhanka Action-kana ku xeen daaban duubistiisa bilaaban doono bisha May ee sanadkan, waxayna sugayaan Shraddha Kapoor oo haatan ku hawlan dhameestirka sedex filim ay isku kor duubeyso Saaho, Street Dancer iyo Chhichore oo dhamaantooda sanadkan 2019 gudihiisa la daawan doono.
Tiger isagana haatan wuxuu duubis ku wadaa filimka Action-ka ah oo ay Hrithik Roshan isla jilayaan lana daawan doono 2 October 2019 waana filim hadal heyntiisa cirka mareyso laguna kalsoon yahay iskooro badan dhanka Boxoffice-ka inuu sameyn doono madaama shirkada Yash Raj Films maal galineyso labo awoodna la isugu keenay.
Aan usoo laabano Baaghi 3 aqbaaraadkiisa waxaa Director ka noqon doono Ahmed Khan oo Baaghi 2 sanadkii hore sameeyay waxaana lagu duubi doonaa gudaha Hindiya iyo Bariga dhexe waana filim si caalami ah loo sameyn doono lana daawan doono 6 Maarso 2020.
F-G: Fadlan walaal xayeysiimaha web-ka Filimside Click kusii hal mar oo kaliya xayeysiinta ka muuqato qoraalka aad aqrisaneysid.
Xitaa haddii qoraalka uusan ku xiiso galineyn fadlan xayeysiinta Click noogu sii midaas ayaa muhiim noo ah anagana abaal ayaan kaaga heynaa.
Warbixin walbo xayeysiin ayay wadaata nagu caawi xayeysiimaha kala duwan inaad halmar Click ku siisid
Waxaa Aqrisay 360